PRAZSKY KRYSAVIK DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Prazsky Krysavik Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Amalka 4 jirka Prazsky Krysavik
Prazsky Krysarik waxaa lagu sheegaa inuu yahay midka ugu yar adduunka. Laabtu way ballaadhan tahay, laakiin gabi ahaanba ma qoto dheer tahay oo waxay u soo degaysaa oo keliya xusullada. Waxay leedahay jidh jilicsan oo jilicsan, kaas oo ku daboolan maqaarka khafiifka ah. Qoorta waa mid dhexdhexaad ah oo cidhiidhi ah, oo taageeraysa madaxa jilicsan. Afku waa cidhiidhi yahay dawacana u eg, oo leh ilko toosan laakiin camiran. Koodhkiisu waa gaaban yahay dhogor aad u dhuuban oo dhalaalaya. Midabka jaakadu badanaa waa madow iyo midab madow. Prazky Krysarik waa 2 cm ka gaaban tahay dhererka ugu badan marka loo eego Miniature Pinscher oo ku jirta joogga ugu yar.
Yar, aad u dhaqso badan, firfircoon, feejigan oo xamaasad badan, noocani wuxuu muujinayaa jacaylka sayidkiisa waana mid aad u feejigan. Prazsky Krysarik wuxuu leeyahay dareen ur heer sare ah. Cabirkiisa iyo firidhnaantiisa darteed waxaa loo isticmaalay dilida jiirka (krysa), taas oo u bixisay magaca 'Krysarik'. Sifooyinkaas uu leeyahay ayaa la soo saaray qarniyadii la soo dhaafay. Isagu waa qof bulsheed, adeec badan oo qalbi furan. Carruurta si wanaagsan buu ula macaamilaa. Dabeecad ahaan waa sharaf iyo caqli badan. Ha u oggolaan eeygan inuu horumariyo Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya halka eygu aamminsan yahay inuu joogo Hogaamiyaha ka buuxi aadanaha . Tani waxay sababi kartaa heerar kala duwan arrimaha dhaqanka . Ku habboon canine ilaa isgaarsiinta aadanaha waa mid aad muhiim u ah.
Dhererka: 7 - 9 inji (19 - 22 cm)
Miisaanka: 2 - 6 rodol (1 - 3 kg)
sida dheri yeela weyn bellied doofaarro ah ka heli
Lugaha khafiifka ah ee dhuuban ayaa u nugul dhaawacyada.
Prazsky Krysarik wuxuu neceb yahay qabowga oo wuu gariiri karaa. Waxay u dulqaadan doontaa oo xitaa qadarin doontaa funaanad diiran maalmaha qaboojinta. Kuwani waa eeyo yar yar oo ku habboon nolosha guryaha.
In kasta oo ay tahay mid duufsan oo lagu xambaarayo xayawaanadan dhadhanka badan, kuwan waa eeyo yar yar oo firfircoon oo u baahan a socod maalinle ah . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta cirifka ama gadaasha qofka haya hogaanka, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasna wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha. Cayaartu waxay daryeeleysaa baahiyo badan oo jimicsi ah, hase yeeshe, sida noocyada oo dhan, ciyaartu ma buuxin doonto dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyaha aan helin socod maalinle ah waxay u badan tahay inay soo bandhigaan dhibaatooyin badan oo xagga dhaqanka ah. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah oo furan oo ka baxsan leedhka, sida barxad weyn oo ood leh. Ha u maleynin in maadaama oo uu yar yahay ay tahay in lagu koobo meel yar.
6 bil jir bulldog Maraykanka
Jaakadda jilicsan ee gaaban, waa in si tartiib ah loo cadaadiyo mararka qaarkood ama si fudud loogu tirtiro maro qoyan. Hubso dhagaha si joogto ah oo ciddiyaha ha la jaro. Noocani waa celcelis daadiya.
iskudhafka eyda buurta bernese iyo adhijirka Jarmalka
Marar dhif ah ayaa lagu arkay banaanka Czech Republic iyo Slovakia, Prazsky Krysarik ayaa si xulasho ah loogu soo xulay inuu yahay eey wehel ah. Prazsky Krysarik waxaa soo saaray Czechs iyo Slovaks oo doonayay inay abuuraan eey aan sifiican wax u tarayn. Taariikh ahaan, isirkan oo la yiraahdo Prague Ratter (Prazsky Krysarik) waxaa looga yaqaanay qeybaha fog ee Czech Republic iyo Slovakia. Eygan yar ayaa inta badan lagu arkaayay xafladaha aristocratic at Castle Castle. Taariikhda hore ee Czech Republic iyo Slovakia wuxuu qurxiyay maxkamadaha Bohemia amiirro iyo boqorro, sidoo kale waxaa lahaa taliyayaal kale oo reer Yurub ah maxaa yeelay boqorrada Bohemia ayaa u soo bandhigay iyaga. Markii dambe, dadkii lahaa waxay ahaayeen muwaadiniin caadi ah. Laga soo bilaabo taariikhda Prazsky Krysarik wax badan ayaan ka baran karnaa, sababtoo ah intiisa badan waa la ilaaliyay. Tusaale ahaan, waxaan ognahay in noocani runtii ka yimid Bohemia asalkiisana dib loogu raadin karo taariikhdii hore ee Czechoslovakia. Sanadkii 1980 taranta si guul leh ayaa loo bilaabay sidaa darteed Prazsky Krysarik mar kale waa xayawaan jecel guryahayaga.
Ejnar the Prazsky Krysarik oo ah eey yar oo jirta 3 bilood
goose cad oo madaxa kuuskuus ah
Ejnar the Prazsky Krysarik oo ah eey yar oo jirta 7 bilood
Amalka, Prague, Czech Republic
Odin the Prazsky Krysarik oo ah eey 10 jir ah asagoo xiran shaati
Odin the Prazsky Krysarik sida eey yar oo jira 4 bilood
Eeg tusaalooyin badan oo Prazsky Krysarik ah
Prazsky Krysarik Sawirada 1
Prazsky Krysarik Sawirada 2
Prazsky Krysarik Sawirada 3
shaybaarka iyo digaagga ey isku darka
1 usbuuc eeyo yaryar yorkie ah
adhijir Jarmal madow ah oo laabta cad
pictures of muqisho hound plott
waa maxay eeyga clifford eeyga weyn ee casaanka ah